Challenge The Good News Paper - Kurwara kukuru kwaisave magumo... (Shona)
Kurwara kukuru kwaisave magumo... (Shona)
Moses aitendera kuti kunze kwekudzidza, hazvaikwanisika kuti munhu abudirire muupenyu
Pamusoro pekubatikana nechirwere chemalaria, Moses Wejuli akavata parupasa mujinga memba yake angomirira rufu rwake. Nokuda kwehupenyu hwake waive huzere kutambura nemarwadzo zvairatidza kuti rufu rwaiva rwakamukodzera.
"Hupenyu hwangu hwakange huzere kusaziva nekusadzidza nokuda kwokukurira mumhuri yaitambura zvikuru," anodaro Moses. "Handiana kuwana mukana wekuenderera mberi nechikoro nokuda kwekuti vabereki vangu vakange vasina mari."
Nokuda kweizvi, Moses akakura achitenda kuti hupenyu hwake hwakange husina maturo nokuda kwekushaya fundo.
Moses anoti, "Ndakange ndisina tariro nokuda kwokuti ndaifunga kuti nenyaya yekusadzidza handaikwanisa kubudirira muupenyu."
Moses anorangarira kuti aingoenda kusvondo musi weKisimusi nemamwe mazuva makuru chete. Vabereki vake vaitenda kuvadzimu nezvitendero zvechivanhu.
"Izvi zvakakonzera kuti tirarame muhusingwa hwemadhimoni ne mweya yakaipa uyezve mhuri yekwedu yakatambudzwa nezvirwere zvizhinji.
Akarara paaive ari achirwara kudaro, Moses akanzwa munhu aigogodza pamukova.
"Mufundisi wesvondo yaive pedyo nesu aifamba achiparidza pamba nepamba," Moses anorangarira. "Akandiparidzira shoko kubva kuna Johane 3 v 16: 'Nokuda kwekuti Mwari akada nyika kudai, akaipa Mwanakomana wake mumwechete, kuti ani nani anotenda kwaari haazofi asi ave noupenyu husingaperi.'
"Mashoko aya akasvikogara pasi-pasi pemoyo wangu, ndakaona kukura kwerudo rwaMwari zvisinei nekuipa kwangu kwose. Ndakakumbira mufundisi vaye kuti vanamatire kuporeswa kwangu. Mushure momunamato ndakaporeswa kubva kuchirwere chemalaria. Ndakakumbira zvekare kuti mufundisi vanditungamire mumunato wokutendeuka nekugamuchira Jesu Kristu saMambo neMuponesi wangu. Ndakakumbira kuregererwa zvivi zvangu naJesu kupfurikidza kwekundifira kwaakaita pamuchinjiko."
Mumazuva akatevera vamwe vemhuri yake havana kufadzwa nekuita kwake sezvo vainge vomutora somutengesi.
"Vabereki vangu havana kugamuchira nyaya yangu yokuzvara kutsva," Moses anodaro, "Ivo vaitoti ndapera basa sezvo ndakange ndisisagone kuenda navo kumabiko echivanhu semazuva akare."
Chero mushure mekubatsirwa kwomudzimai vake nemapatya shure kwemakore mana okushaya pamuviri, vabereki vake havana kumugamuchira.
"Kushungurudzwa kwakaramba kuchienderera mberi kumba asi mufundisi vakaramba vachitikuridzira. Mwari akatiitira zvakanaka nokudaro takaramba tichikura nokusimba maari," anodaro Moses.
Moses aimbovimba kuti hupenyu hwakange husingabetseri nokuda kwekusadzidza asi ikozvino avekuziva kuti Jesu Kristu akafa, akamuka zvekare kune vasina kudzidza uye nekune vakadzidza uye kuti anopa hupenyu husingaperi kune munhu wese zvake.
"Mwari akasandura maonero angu ekubudirira muhupenyu. Kunyange chiri chokwadi kuti handina kuwana dzidzo yakanaka, ndirikugona kushanda nekuriritira mhuri yangu. Ndirikugona zvekare kuendesa mapatya angu pamwechete nevamwe vana vangu kuchikoro.
"Mwari akandibatsira kukunda kusarudzwa kuripo kuburikidza nekusadzidza uye ndavekuziva kuti Mwari anogona kushadisa chero ini kunyange ndisina kudzidza." Moses anokomekedza. •
<< Crippling illness was not the end
Reunited with fathers >>